မတူကွဲပြားခြင်းတဲ့.လား…. အသက်ရှူမ၀တော့ဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » မတူကွဲပြားခြင်းတဲ့.လား…. အသက်ရှူမ၀တော့ဘူး
Posted by naywoon ni on Mar 31, 2011 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 12 comments
မတူကွဲပြားခြင်းတဲ့.လား.။ ကျွန်တော်က ဒီလိုမမြင်ဘူးဗျ.။ ကျွန်တော်တို့ နေရာဒေသဟာ ကမ္ဘာ့ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံရဲ့ အယူအဆ ၊အတွေးအခေါ် ယုံကြည်မှု အားလုံးကို လက်သင့်ခံထားတဲ့ နေရာဒေသ တစ်ခုလို့ပဲမြင်မိတယ်..။ ဘာကိုအဓိကထားလဲလို့ ပြောရအောင် လည်းမယ်မယ်ရရ ပြောလို့မရဘူး။ ရှေးထုံးမပယ်နဲ့ တဲ့ ။ ဒီစကားလုံးနဲ့ ချုပ်ကိုင်ထားပြီး ကိုယ့်အရင်က လုပ်ခဲ့သမျှ တွေးခဲ့သမျှ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေကိုလည်း ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းမရှိပဲ လက်ခံထားကြတာပဲ..။ နတ်။ဗေဒင်။နက္ခတ္တ..။လက်မလွှတ်ဘူး။ ဒီကြားထဲ ဘာဂန္ဓာရီ ညာဂန္ဓာရီ ၀င်လာသေးတယ်။ ၀ိဇ္ဖာမှာ လိပ်စာမရှိဘူးဆိုလည်း ယုံလိုက်တာပဲ။ ပြီးတော့ စာကလေးဗေဒင်ဆိုလည်း လာဦး ထဲက..။ နောက်ရှိသေးတယ်..။ ဂဏန်းဗေဒင်တဲ့..။ ဟော ထီဗေဒင်တဲ့…။ ပေသီးနှိုက်တဲ့ ထီကိုတောင်ဗေဒင်က လက်မလွှတ်ဘူး။ ဟော ဘိုးတော်တဲ့ မယ်တော်တဲ့ လက်အုပ်လေးချီလို့..။ လာဦးမယ် အန်ကုံးတို့ ကွမ်ရင်မယ်တော်တို့..။ လက်မနှေးစေရဘူး။ လက္ခဏာ ကျပြန်တော့ အရှေ့တိုင်းကဘယ်လို..။ ကိုင်ရိုက သည့်နှယ်..။ ဟိုဆရာမသေခင်က ပေးသွားတဲ့ပညာက ဘာတဲ့ တားရော့ခ် ဆိုလား ။ ဖဲချပ်နဲ့ ဟောတဲ့ဗေဒင်တဲ့..။ ကျန်သေးတယ် အကြားအမြင်တဲ့ အောက်လမ်း အထက်လမ်းတဲ့..။ စုံလို့..။ သိုက်ဆရာ ဆိုတာလည်းရှိသေး..။ ပူဇော် ပသတဲ့ အရာတွေကလည်း များမှများ။ ထန်းရည်ခေတ်ကသေတဲ့ နတ်ကလည်း ဂျော်နီဝါးကားမှဆိုလား။ ဘဲဥကျွေးပြီးတော့ အဆဲခံလားခံရဲ့..။ တော်တော်ရှုပ်တဲ့သူတွေ..။ အင်းကွက်ဆွဲ မီးရှို့ ပြာချသောက်တဲ့သူတွေကသောက်.။ ဂိုဏ်း ဂဏတွေကပေါမှပေါ..။ အတိတ်..။နမိတ် တဲ့ တဘောင်တဲ့..။ သေတဲ့သူက ပူးပြောတယ်ဆိုတော့လည်း ယုံလိုက်တာပဲ။ သေပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ဘယ်နှစ်ဘ၀ပြောင်းသွားပြီး မှန်းတောင်သိနိုင်တာမဟုတ်ဘူး..။ လူသေပြီးမှ သရဏဂုဏ်ထတင်ကြတာက အရူးထမှုသက်သက် ဘယ်သူကမှလည်းထောက်မပြကြဘူး..။ အိပ်မက်ကျမ်းဆိုတာလည်း ဖတ်ရသေးတယ်။ ယတြာ တဲ့ ဓါတ်ဆင်ဓါတ်ရိုက်တဲ့..။ တော်တော်အပြောကောင်း..။ သူပြောသလိုမလုပ်ရင်ပဲ ချက်ချင်းသေတော့မလို..။ သင်္ကြန်စာဆိုတာရှိသေး။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်တာနဲ့ နောက်နှစ်အတွက် ဝေ ပြီ။ အဲ..အော်ဟစ်ရောင်းကုန်ပြီ..။ ကျန်တာမှန်မမှန်တော့မသိဘူး။ စိတ်ကုန်စရာကောင်းတာက အဲဒိအထဲမှာပါတဲ့အတိုင်း သင်္ကြန်အတက်အကျ လိုက်လုပ်ရတာပဲ..။ သတိထားမိတဲ့သူတွေကတော့ ထားမိမှာပေါ့..။ ရက်သားသမီး ပြဿဒါး ရက်ရာဇာ နဂါးလှည့်တဲ့ ။ အိမ်ဆောက်တာတောင်နေ့သင့်နံသင့်တဲ့..။ ချမ်းခြောက်ထားတဲ့စကားရှိသေးတယ်။ နတ်နဲ့နဂါး မလှည့်စားနဲ့တဲ့..။ ဘာကန့်တော့ပွဲ ညာကန်တော့ပွဲနဲ့ အုန်းပွဲ ငှက်ပျောပွဲတွေကလည်း ဗုဒ္ဓဆင်းတော်တော်အောက် ရောက်လိုရောက်နဲ့..။ အဲဒိတော့ ဘာတဲ့ ထေရ၀ါဆိုတာ။ အပြင်မှာ တစ်ကယ်ရှိသေးရဲ့လား စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီနော်။ စာထဲပေထဲမှာတော့ ထည်ထည်ဝင်ဝင်ရှိနေသေးတာပဲ ၀မ်းသာအားရဖတ်ရှုနေရတယ်။ ယုံကြည်မှုပဲစုံသလားမဟုတ်ဘူး။
ဟိုအရင် ကျန်ကျောင်းခောတ်ကလည်း ကျန်ကျောင်းမို့..။ခု ကိုရီးယားခေတ်ကျတော့လည်း ကိုရီးယားနှယ်..။ စကားအပြောအဆို အမူအရာ က အစ။ အ၀တ်အစားအဆုံး။ လိုက်မတုတာ မလေ့လာတာက သူတို့တွေ ဘာပညာတွေသင်သလဲ။ ဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြပြီး ဘယ်လောက်ဝင်ငွေရှိလဲ။ မသိမသိ။။ အစားအသောက် အ၀တ်အစားအနေအထိုင် သူတို့မသိတာမရှိ။ ဒီဗွီဒီ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်သွားကြည့် ပေါသလိုက်သမျှ ဇာတ်ကားတွေ တစ်သက်လုံးကြည့်လို့တောင်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကိုပဲ အလုအယက် ရွေးနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေ..။ ကောင်လေးတွေက လည်းကိုရီးယားတာပဲ..။ သူတို့က အခန်းတံခါးပိတ်ကြည့်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးရွေးတာ..။ ဒစ်စ်ပြားမြင်လိုက်တာနဲ့ ဒါကြည့်ပြီးသားလား အသစ်လားသိနေတယ်ဆိုပဲ..။ ဟော လ္ဘက်ရည်ဆိုင်အ၀င်မှာကြားလိုက်သေးတယ်။ အမေရိကန် စစ်စတန်နော်တဲ့..။ သဘောကကိုယ်စားတာကိုယ်ရှင်းပေါ့..။ အိမ်း ရုပ်ရှင်တွေ ဗွီဒီယိုတွေကြည့်ဦးမလား အရင်က မြန်မာကားကြည့်ပြီးရင် အိန္ဒိယ ကကား ကြည့်စရာမလိုဘူး။ ခု ကိုရီးယားကားကြည့်စရာမလိုဘူး။ အဲ ကိုရီးယားကားက ကြည့်ပြီးသားဆိုတော့ မြန်မာကားလက်လွှတ်ထားလို့ရပြီ။ ဒီလောက်ပဲ ။တော်ပြီ။ ကိုယ့်လူတွေ သောက်သုံးမကျတာနဲ့ အခြား ဘာသာတွေလူတွေ သွားထိခိုက်လို့မဖြစ်ချေဘူး။ တော်ကြာ သူကြီးက ဆူနေဦးမယ်။
ကျွန်တော်တို့နေရာလေးဟာ ပန်းပေါင်းစုံပင့်နေတဲ့နေရာလေးပါ..။ ပန်းပင်တွေကိုတော့ ရေလောင်းပေါင်းသင်လုပ်မဲ့သူမရှိပါဘူး။ ခြောက်တဲ့အပင်ကခြောက် သေတဲ့အပင်ကသေနဲ့ မိုးရွာတော့ မိုးေ၇နဲ့ရောပြီး ပုတ်အဲ့အဲ့ ထွက်နေတဲ့နေရာကလည်း နံစော်နေတာပါပဲ..။ ဘယ်သူမှ လာပြီး မရှင်းလင်းကြပါဘူး။ ပန်းပင်သစ်တွေကိုသာ ဟိုကယူလာ ဒီကယူလာပြီး စိုက်သွားကြတာ။ အပင်ရှင်အောင်လေး ပြုစုသွားပြီး ထားခဲ့ရော…။ အဲဒိပန်းက မွှေးတဲ့ ပန်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ နံတဲ့ပန်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ မူးမော်စေတဲ့ပန်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ အဆိပ်ပါချင်ပါလာမယ်။ ဘာကိုမှဂရုမစိုက်ကြဘူး။ လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီး ဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေကြ..။ လိုချင်တာရအောင်ယူပြီး ပေးရမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုကျတော့ သူတစ်ပါးလွဲချ။ ကောင်းကြသေးရဲ့လား? ။ ဒီအထဲကျွန်တော်လည်းပါခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တာဝန်ကိုသိလိုက်ချိန်မှာ အရမ်းနောက်ကျနေသလို ဘယ်လိုမှထိန်းသိမ်းမနိုင်ဖြစ်နေပြီ။ ဒါကို သဘောပေါက်တဲ့သူက နဲနဲရယ်။ အများဖြစ်သလိုလိုက်ဖြစ်ကြတာပေါ့ဆိုတဲ့သူတွေကြားမှာ အသက်ရှုရတာ တောင်မ၀ချင်တော့ဘူးးးး။ ဟူးးးးးးးးး
ဆြာနီပို့စ်တင်လိုက်တဲ့ အချိန်ကို တွက်ကြည့်လိုက်တော့ စနေဂြိုလ်နဲ့ ရာဟုဂြိုလ်နှစ်လုံး တတန်းထဲကျချိန်ဖြစ်နေလို့ တနင်္ဂနွေနေဝန်နီကြီး အရှိန်တငြီးငြီးနဲ့ ဒေါကီးနေတယ်လို့ ဗေဒကျမ်းမှ ဆိုထားသဗျ။ လက်ဝါးနဲမြေကြီး ရိုက်ရင်လွဲအုံးမယ်၊ ကိုနီကို ဟောထားတာကတော့ ကွက်တိပဲဗျို့။ ပို့စ်တင်ထားတဲ့စာကို ဖတ်ပြီးမှ ဟောကိန်းထုတ်သလား အောက်မေ့ရတယ်။ ဗေဒင်ပညာကတော့ အံ့မခန်းပါပေပဲ။
အဘနီ အတက်ဂိုရှုရှုမှန် ….
တော်တော်လေ့လာထားပုံရတယ် လိုင်းပေါင်းစုံသွားတာပဲ … ကျန်သေးတယ် ရှောင်ရက်တွေ- မွေးနေ့ သောကြာ တနင်္လာ ပီးတော့ ဗုဒ္ဓဟူး ဆို ၄၅ရက် လာဒ်ပိတ်တယ်။ ပြဿဒါး ရက်ပုတ် လပြည့် လကွယ် တနင်္လာ(နှစ်ခါပြန်ရတယ်ဆိုပဲ) နဂါးခေါင်းဘယ်ညာ ….. စသဖြင့် လုပ်စရာရှိတာမလုပ်ပဲ ရှောင်ကြတဲ့ရက်တွေ တစ်နှစ်စာ မှတ်တမ်းတင်ပေးပါအုံးဗျ
နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ကား မြန်မာပြည်ကနတ်ကို ပြပြီးစီးခွင့််မောင်းခွင့်တောင်းရတာရှိသေးတယ် လိုင်စင်ထက်တောင်အရေးပါနေသေးတယ်
သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ ဆိုတာကြီးက .. ဓမ္မစက်နဲ့..
အစိုးရ.. အာဏာစက်ပေါင်းပြီး. လူထုကြီးကို အုန်းသီး၊ ငှက်ပျောသီး.ပိုက်ဆံ ..စတာတွေဖြုန်းတီးကုန်စေနိုင်တဲ့..နတ်စုတ်နတ်ပုတ်တွေ.. ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးသင့်တယ်..။
သူတို့ မူရင်းတိုင်းပြည်.. အိန္ဒိယကို .. တသက်တာပညာတော်သင်ပြန်ပို့လိုက်သင့်တယ်..။
အခုဟာက.. လွန်ခဲ့တဲ့..နှစ်၁ထောင်ကလည်း ..အုန်းသီး..ငှက်ပျောသီး..။ အောင်သပြေပဲ..။
အဆင့်အတန်းက … တက်ကိုမလာတော့ဘူးး..။
( ပန်းပင်သစ်တွေကိုသာ ဟိုကယူလာ ဒီကယူလာပြီး စိုက်သွားကြတာ။
အပင်ရှင်အောင်လေး ပြုစုသွားပြီး ထားခဲ့ရော…။)
အဲဒါကြောင့် ပန်းတိုင်းပွင့်ပါစေမွှေးပါစေ ဆုမတောင်ချင်တာပေါ့..။ အဲဒိစကားက ဥက္ကဌကြီးမော်ရဲ့စကားလေ..။ တစ်ချို့ပန်းတွေရဲ့ အနံ့က လူတွေက မူးဝေစေတယ်။ တစ်ချို့က အော့အန်စေတတ်တယ်။ တစ်ချို့ကြပြန်တော့ အနံ့ရတဲ့သူတွေက ရူးသွပ်စေနိုင်တယ်..။ လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ စွဲလမ်းသွားပြီဆိုတဲ့အရာက ကောင်းကျိုးမပေးတာများတယ်ဘုဘုရဲ့..။ နင်အရက်စွဲသလိုမျိုးပေါ့
နိုင်ငံခြားက လာတဲ့ကားကို နတ်တင်မှ စီးခွင့်ရတာတော့ မှန်ပါရဲ့ တော်တော်လွဲမှားတဲ့ အယူအဆတွေပါ တစ်ချို့အငှားကားသမားတွေဆို အိမ်ကမထွက်ခင်ကားမထွက်ခင်ပေါ့ ခြင်းကိုဝင်တိုက်တာ အမွှေးတိုင်ထွန်းတာမျိုးတွေကို တွေ့ဖူးပါတယ်….
ညောင်ပင်ကြီးတော့ လာဘ နည်းကုန်တော့မှာဘဲ.. ဟီးဟီး..
အဘနီပြောတာတွေ သိတော့သိပေမဲ့ … အဲ့ဒီလို လေးများ ဗေဒင်မေး ယတြာလေးလုပ်ရင် စိတ်ထဲ ပေါ့ပါး သွားသလိုပါပဲ … တချို့ လောကီ ပညာတွေကလည်း တိုက်ဆိုင်တာလား ၊ ဘာလား မသိဘူး ဆန်းကြယ်ပြန်တယ်လေ … ။ တခါက အရမ်း တော်တယ်ဆိုတဲ့ တားရော့ ဆရာမဆီ သွားကြတာ … ဘဲကို ဟောလိုက်တယ်လေ … မိန်းမ ၂ ယောက်ဖြစ်ကိန်းမြင်တယ် ဘာညာနဲ့ … ။ စိတ်တိုလိုက်တာ အိမ်ပြန်လမ်းရောက်တော့ … ပြသနာ ရှာပြီး အဲ့ဒီ နောက်တယောက်က ဘယ်သူလည်း မေး … ဟိုကလည်း မရှိပါဘူး ပြော … မေးလို့ကလည်း မရတော့ စိတ်တိုတာ မေ့တောင် လဲ မတတ်ပဲ … အီးတုံးက စိတ်ကြီးတယ် … ဒေါကီးရင်း အသက်ပါထွက်နိုင်တယ် … ။ သေချာ ပြန်တွေးကြည့်တော့ မှ … သူကလည်း အဲ့ဒီလို လူမျိုး မဟုတ်ဘူး … ကိုယ်တွေကြားထဲက နားလည်မှူနဲ့ သံယောဇဉ်ကလည်း ဘယ်လိုမှ လွဲချော်စရာမရှိဘူးလေ … ။ ဗေဒင်သွား မေးတဲ့ နေ့က အမေလည်း ပါတယ်… ။ အမေကလည်း သူ့ကို ပြသနာရှာတော့ … အီးတုံးကို ဆူတာပေါ့… ။ စိတ်အရမ်းတိုလွန်းလို့ ဘာမှ မလုပ်တဲ့ သူ့ကို ထုမိတာ ဘယ် နှခါမှန်းတောင် မရေတွက်နိုင်ဘူး … ဗေဒင်ဆရာမတယောက်ရဲ့ စကားကို ယုံစားမိသွားတာကြောင့် အဲ့ဒီနေ့က တယောက်တည်း ကားပေါ်ကဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်ဖို့ လုပ်မိသေးတယ် … ။ သွေးအေးတော့မှ ….” ငါ အသိဥာဏ် နည်းလှချည်လား” လို့ တွေးရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်… ။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း ဗေဒင်ဆီလုံးဝမသွားတော့ပါဘူး … ။
အဘနီရေ လူတွေက မျှော်လင့်တာတွေ စွဲလန်း တာတွေ များနေတယ်။
ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်ညဏ်နဲ. မစဉ်းစာကြဘူး၊အန်ကယ်ကြီးပြောသလို
စိတ်အစာကျွေးတဲ.လူတွေ ကြောင့်ပေါ.လေ။ထေရ၀ါဒ ကိုမေ.နေကြတယ်
သရဏဂုံ (၃) ပါးကိုမေ.နေကြတယ်လေ။